Bixiyeyaasha Foormulada Nafaqada, Alaab-qeybiyeyaasha OEM ee Nafaqada- Iibso nafaqo - Medicinerawmaterials.com
Dhagax cagaaran > Products > Caanobooraha
Sharciyeynta iyo Sanjabiisha Sunta…
Adeegyada OEM ee GMP Certified…
OEM ee Slimming Product Product C…
OEM ee Gabowga Anti Fiican…
OEM Noocyada Xidhmada Vitami…
OEM ee Wadajirka Caafimaadka Glucosamin…
OEM / ODM nafaqada
Waxaan bixin karnaa calaamado tayo sare leh oo alaab / adeegyo nafaqo oo OEM ah.
Waxaan bixin karnaa qaaciidooyinka nafaqada ee xoojinta galmada, gabowga, daryeelka maqaarka, miisaan lumis iyo shaqooyin kale. Maaddooyinka nafaqada sida borotiinka amino acids (whey & plant-based), creatine, arginine, beta-alanine, curcumin, glucosamine waxaa badanaa loo isticmaalaa qaaciidooyinka nafaqada.
Qaaciidooyinka xoojiya galmada, waxaan leenahay dhowr qaacidoor, inta badan qaacidada kacsiga dabiiciga ah, sida Foomka Kacsiga Dabiiciga ah ee dhiig karka iyo wadne xanuunka, iyo Foomka Kacsiga Dabiiciga ah ee dhiig karka.
Marka la eego gabowga iyo daryeelka maqaarka, waxaan leenahay qaaciidooyin sida taxanaha budada ah ee Free-qalalan oo khuseeya dhamaan dadka nafaqada sare leh, daryeelka maqaarka, waxay hagaajin karaan maqaarka maqaarka, gabowga. Ka sokow, marka la barbardhigo alaabooyinka la midka ah ee noocyada kale, isticmaalkeeda oo kor u qaadi kara waxtarkooda, yareyn kara dhibaatooyinka iyo sii dheereynaya nolosha waxtarka alaabada ee suuqa.
Qaacidooyinkayaga miisaanka culus ayaa beegsan kara ragga iyo dumarka siday u kala horreeyaan. Tusaale ahaan, qaaciidooyinkeenna rumaysta kiniinka si fiican u dhismay ee L-carnitine Slimming for man (taxanaha Slimming) ayaa si gaar ah waxtar ugu leh yareynta caloosha weyn, soo celinta jirka caatada ah, iyo hoos u dhigista triglycerides. Haweenka, waxaan bilaabaynaa L-carnitine Slimming Pill (taxane taxane ah) si looga caawiyo inay baabi'iyaan sunta, qurxinta maqaarka iyo yareynta miisaanka.